भुटानी शरणार्थी बालबालिका दक्षिण अष्ट्रेलियामा नेपाली सिक्दै – Online Khabar
१. नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीको एआईजीमा बढुवा
२. खेलाडीको कमाइः सन्दीपको ६ महिनाको आम्दानी करोड, अरुको कति ?
३. उपत्यकाका नदीको छेउमा नजान आह्वान
४. दलाल पुँजीवाद र संकटको पुनरुत्पादन
५. अमेरिकामा नेपालीमाथि गोली प्रहार, १ को मृत्यु, १ घाइते
६. कथाः साथीकी बैनी
७. प्रतिबन्धको नाममा अमेरिकाले आगोसँग खेल्दैछः रसिया
८. उमेर ढल्केपछि यौनइच्छामा कमी आयो, के गर्ने करुणा जी ?
९. साहित्यवार्ताः मभन्दा जुनियरहरु कुलपति भइसके
१०. रिलिज डेट तय गर्दै ‘छक्का पन्जा ३’को ट्रेलर रिलिज
११. प्रधानमन्त्री ओली आज अमेरिका जाँदै
१२. निगमले अब अप्ठेरो अवस्थामा सेनाका चालकको सहयोग लिने
ओल्ड ट्रार्फड फर्किए फर्गुसन
ओली हैरानीको चिरफार
फुलहमले वाटफोर्डलाई बराबरीमा रोक्यो
भुटानी शरणार्थी बालबालिका दक्षिण अष्ट्रेलियामा नेपाली सिक्दै
भुट्नीज ईथ्नीक स्कूलले मनायो पाँचौ वर्षगाठ
२०७४ असोज २४ गते १८:२८ मा प्रकाशित
दक्षिण अष्ट्रेलियाको भुट्नीज ईथ्नीक स्कूलले पाँचौ वर्षगाठ भव्यताका साथ मनाएको छ ।
शनिबार आयोजित कार्यक्रमा यस स्कूलमा पढ्ने मसिना बालबालिकाले स्कूलमा गएको पाँच वर्षमा सिकेका कला आफ्ना अभिभावक र अतिथीहरु सामू पस्केका थिए ।
दुई दशक भन्दा बढी नेपालमा शरणार्थीको जीवन बिताएर पुनर्वासका लागि विकसित मुलुकतिर लागेका भुटानीहरुनयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषा नविर्सियोस भन्नेमा सजग छन् ।
नयाँ पुस्तालाई भाषा र संस्कृतिको ज्ञान दिन पुनर्वासित भुटानीहरुले खोलेका धेरै नेपाली पाठशाला मध्येको एक हो भुट्नीज ईथ्नीक स्कूल ।
यो स्कूलमा डेढ सय बढी१५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु हरेक शनिबार नेपाली लेख्न र पढ्न आउँछन् । नयाँ पुस्तामा नेपाली सिक्ने रहर र पुराना पुस्तामा नेपाली सिकाउने जाँगर झनझन बढेर जाँदैछ ।
भाषा बारे भुटानी समुदायका वयस्क मात्र हैनन, केटाकेटी पनि निकै संवेदनशील हुन थालेका छन् । स्कूलका प्रिन्सिपल लोक पौड्याल भन्छन्, ‘बहुसंस्कृतिको महासागरमा पसेका हाम्रा कलिला बालबालिकाले आफ्नो भाषा मात्र सिके भने पनि इतिहास र अस्तित्व विर्सने छैनन् । हाम्रो प्रयत्न भनेकैति कलिला मगजमा हामी को हौ भन्ने ज्ञानको विजारोपण गर्नु हो ।’
नेपाल छोड्नु अघि बाबु आमा आफ्ना छोराछोरीले राम्रो अंग्रेजी बोल्न र पढ्न प्ररित गर्थे । त्यो त्यस बेलाको आवश्यकता थियो ।
तेस्रो मुलुकतिर पाईला सार्दै गर्दा अंग्रेजी पहिलो प्राथमिकता बनेको थियो । नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहँदा टुटेफुटे सिकेको अंग्रेजीले एउटा पुस्तालाई अष्ट्रेलिया आएपछि जीवन यापनमा हम्मे हम्मे परिरहेको छ । कमजोर अंग्रेजी भएकाहरु थकथक गर्छन आज ।
समयले कोल्टे फेरेको छ । नाबालकै यता आएका वा यहाँ आएर जन्मेका धेरै बालबालिकाहरुलाई नेपाली बोल्न धौधौ पर्छ । त्यसैले उनीहरु अंग्रेजी हैन नेपाली सिक्दैछन अहिले ।
स्कुल, हाटबजार, टीभी, अन्लाईन जहाँपनि अंग्रेजी मात्र देखेका उनीहरुले बोली फुट्दा अंग्रेजीमै बोले । हजुरबा हजुरआमासँग हुर्कने अवसर पाएका थोरैले नेपाली सिक्ने मौका पाए ।
साता भर स्कूलमा अंग्रेजी बाहेक केही बोल्दैनन र सुन्दैनन पनि उनीहरु । कैयौं जातिका केटाकेटी भेला हुने स्कूलमा अंग्रेजी नबोली त भरै छैन । परिवार भित्रै पनि अंग्रैजी नै बोल्न सहज मान्छन । लाग्छ मनको कुरा व्यक्त गर्न अंग्रेजीमा सरल छ, नेपालीमा सारै अप्ठेरो । चाहेको कुरा सबैले बुझ्ने गरी व्यक्त गर्न नेपाली शब्द नै पुग्दैन ।
यही परिवेशलाई मध्यनजर गरेर दक्षिण अष्ट्रेलियामा बस्ने भुटानीहरुले आफ्ना नयाँ पुस्तालाई नेपाली बोल्न सिकाउनु पर्ने आवश्यकता देखे ।अरु नभए पनि आफ्नो भाषाको निरन्तरता नयाँ पुस्तामा हुनु पर्छ भन्ने आवश्यक्ता देखे । त्यही आवश्यकताको उपज हो भुट्नीज ईथ्नीक स्कुल ।
शनिबारको प्रस्तुतीले के देखायो भने यो शनिबारे स्कूलले बालबालिकालाई नेपाली लेख्न, बोल्न र पढ्न मात्र सिकाएन, नेपाली नाच सिकायो, मादल र बासुरी सिकायो । अनि सहज रुपमाकार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिकायो ।
अतिथिका रुपमा आएकी बहुसांस्कृतिक मन्त्रि जोई बेट्टीसनले यी बालबालिकाको खुलेर प्रशंसा गरिन र आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाईराख्न प्रेरित गरिन् । उनले नयाँ पुस्तामा पनि नेपालीपनलाई जीवन्तता दिन लागिपरेका सबै स्वयमसेवकहरुलाई पनि आफ्नो यो सराहनीय काममा लागिरहन अनुरोध गरिन् ।
आफ्नो भाषा र संस्कृतिबारे नानीहरुलाई सिकाउन गरेको भुटानीहरुको प्रयासलाई दक्षिण अष्ट्रेलियाका प्रिमियर (मुख्य मन्त्री)ले पनि प्रशंसा गरे । उनले भने, नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको प्रचारले दक्षिण अष्ट्रेलियालाई बस्नका लगि सारै राम्रो ठाउँको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ‘
आफ्नो सन्देशमा राज्यकी शिक्षा मन्त्री सुजन क्लोजले छोटो समयमा भुटानीहरुको गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरिन् ।
भुटानीहरुको नेपाली भाषाप्रतिको यो लगाव र समर्पणको अर्को प्रतिफल पनि निकै मिठो छ दक्षिण अष्ट्रेलियामा । यहाँको राज्य सरकारले नेपाली भाषालाई सरकारी स्कूलमा पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ केही बर्षदेखि ।
नेपाली वा अन्य कुनै पनि समुदायका केटाकेटीले कक्षा ८ देखी नेपाली भाषालाई एउटा विषयका रुपमा छान्न पाउँछन् । यसले नेपाली बोल्नेहरुलाई पढाईमा सहजता मात्र थपेको छैन, नयाँ पुस्तामा आफ्नो भाषाप्रतिको मोह र प्रेम उजागर गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यसको निरन्तरताले नेपाली भाषा यहाँ पुस्तौ मर्दैन भन्ने आशाको किरण पलाएको छ ।
भाषिक स्वान्त्रताको आवाज उठाउँदा देशबाटै लखेटिएका भुटानीहरुका लागि आफ्नो भाषाले यति धेरै मान्यता पाउनु भनेको ठूलो उपलब्धि हो ।
भुटानले नेपाली भाषालाई कुल्चन खोजेको थियो, मार्न खोजेको थियो । अष्ट्रेलियाले त्यसको विपरीत फक्रने र फस्टाउने वातावरण सृजना गरिदिएको छ । सभ्य समाजले अरुको सभ्यता र अस्तित्वलाई सम्मान गर्न जान्नु पर्छ भन्ने ज्ञान भुटानलाई मिलोस् ।
घर फिर्तीको आन्दोलन सफल नभएपछि पुनर्वासमा निस्कदै गर्दा भुटानी शरणार्थीमा एउटा डर थियो -विरानो मुलुकमा गएपछि नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषा र संस्कृति चटक्क विर्सन सक्छ ।
दशकौं आफ्नो अस्तित्वका लागि लडेको पुरानो पुस्ताले यो चिन्ता राख्नु सामान्य हो । उनीहरुको चिन्तालाई भुट्नीज ईथ्नीक स्कुलले सम्बोधन गर्दैछ ।
प्रतिबन्धको नाममा अमेरिकाले आगोसँग खेल्दैछः रसिया
साहित्यवार्ताः मभन्दा जुनियरहरु कुलपति भइसके
माझी बस्ती पुनर्निर्माणका लागि स्वेता-श्री फाउण्डेशनलाई ५० हजार हस्तान्तरण
विश्व साइकलयात्री पुष्कर शाह गीत गाउँदै रकम जुटाउँदै